Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Caawa Oo Sabti Ah Qoreen Wargeysyada Yurub | Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Caawa Oo Sabti Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
January 26, 2020 Balaleti Comments Off on Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Caawa Oo Sabti Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
Sida aad uga barateen shabakada Laacib waxay idiin soo gudbineysaa wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ee ay qoreen warbaahinta Yurub. Waxaan caawa oo Sabti ah idiin soo gudbineynaa heshiisyada la dhameystiray caawa iyo wararkii ay qoreen warbaahinta Yurub.
Arsenal ayaa ku dhow saxiixa xiddiga doonaya inuu ka tago Atletico Madrid ee khadka dhexe Thomas Lemar sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Spain.
Warbaahinta El Chiringuito ayaa sheegaya in Diego Simeone uu doonayo inuu iska diro xiddiga Faransiiska si uu lacag ugu helo soo xerogelinta weeraryahanka PSG Edinson Cavani.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa weli lala xiriirinayaa inuu ka tagayo Arsenal bisha Janaayo iyadoo haatan la sheegay in Paris Saint-Germain ay amaah ku dooneyso xiddiga reer Gabon oo ay si joogta ah u la wareegto xagaaga.
Shabakada FootMercato ayaa sheegtay in 30 jirkaan loo arkay bedelka macquulka ah ee Edinson Cavani haddii uu go’aansado inuu isaga dhaqaaqo kooxda hogaamineysa horyaalka Faransiiska xilli ciyaareedka oo socda.
Tababaraha kooxda PSG Thomas Tuchel ayaa xaqiijiyay in daafaca bidix Layvin Kurzawa inay ku soo bedelayaan xiddiga Juventus Mattia De Sciglio.
Kurzawa ayaa si xoogan loola xiriirinayay Arsenal bishaan Janaayo, laakiin waxay haatan u muuqataa inuu ka ciyaarayo Italy.
Daafaca reer Spain Pablo Mari ayaa gaaray magaalada London ee caasimada Ingariiska si uu tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda Arsenal, kooxda ayaa wahadalo ugu jirta inay amaah kula soo wareegto daafaca kooxda reer Brazil ee Flamengo.
Daafacaan ayaa ku biiray Flamengo xagaagii, waxaana uu noqonayaa saxiixii ugu horeeyay ee tababare Mikel Arteta iyadoo Gunners ay dooneyso in qiyaar loo siiyo inay si joogta ah kula wareegto xagaaga danbe.
Christian Eriksen ayaa ku dhow inuu heshiis 16.8 milyan ginni kaga tago Tottenham kuna biiro koxda Inter Milan isagoo mushahar u qaadan doona 320 kun ginni isbuucii sida ay sheegtay Sky Sport Italia.
Tababare Jose Mourinho ayaa sheegay in kooxdiisa ay u fiican tahay in sida ugu dhakhsiyaha badan loo xaliyo mustaqbalka xiddiga khadka dhexe ee Denmark.
Barcelona ayaa ku dhow saxiixa weeraryahanka Valencia 28 jirka Rodrigo iyagoo ku doonaya heshiis amaah ah iyo in qiyaar loo siiyo inay si joogta ah u la wareegaan xagaaga danbe.
Sida ay qortay jariirada Marca, Valencia ayaa durbaba raadineysa bedelka Rodrigo madaama uu xiddigaan doortay inuu u wareego Camp Nou, waxayna doonayaan in Paco Alcacer ay kala soo wareegaan Borussia Dortmund.
Weeraryahankii hore ee xulka Ingariiska Jermain Defoe ayaa heshiis hordhac ah la saxiixday kooxda tababare Steven Gerrard ee Rangers isagoo ka soo wareegaya kooxda Bournemouth xagaaga.
Weeraryaahnka reer Argentina Paulo Dybala ayaa qirtay inuu aad ugu dhawaa inuu ka tago Juventus xagaagii xilli ay xiiseynayeen kooxaha Manchester United iyo Tottenham.